QM: 74,000 kun oo Qof oo Gaarey Dalka Yemen Sanadkan 2009 • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / QM: 74,000 kun oo Qof oo Gaarey Dalka Yemen Sanadkan 2009
QM: 74,000 kun oo Qof oo Gaarey Dalka Yemen Sanadkan 2009
Hay’adda qaramada midoobey u qaabislan arimaha qaxootiga ee UNCHR ayaa daaha ka qaaday tirada rasmiga ah ee sanadkan ka gudubtey gacanka cadmeed. UNCR ayaa sheegtay in sanadkan gudihiisa ay gaareen dalka Yemen 74,000 kun oo qof kuwaas oo u badan Itoobiyaan iyo Soomaali, waxayna wadanka Yemen ku yimaaden arimo qaxooti ama dhaqaale, tiradan ayaa ka badan 50% sanadkii la soo dhaafey ee 2008.
Dadkan ayaa intoobadan ku yimid dalka Yemen doomo yaryar oo ay dadka ku tahriibiyaan kooxo ka shaqeysta tahriibinta dadka.
Afhayeen u hadley UNCHR oo lagu magacaabo Andrej mahecic ayaa sheegay in 309 qof ay ku dhinteen badda gudaheeda ama ay dileen kuwa wax tahriibiya sanadkan gudihiisa. Halka sanadkii la soo dhaafy ay ku dhinteen 600 oo qof.
Afhayeenka UNCHR u hadley Mr. Mahecic ayaa sheegay in dadka ugu badan ee Yeman sanadkan soo gaarey ay yihiin Itoobiyaan, Waxa aan ka wel welsanahay in badan oo kamid ah dadkan in xabsiyada la dhigay halka qaarkoodna dib loo tarxiilay iyada oo aan laga dhegaysan in ay magangelyo dalbanayaan iyo in kale. ayuu yiri afhayeenku.